'I-Red Dead Redemption 2' Ine-Serial Killer Kuzo I-Thar Hills - Imidlalo
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo 'I-Red Dead Redemption 2' Ine-Serial Killer Kuzo I-Thar Hills
'I-Red Dead Redemption 2' Ine-Serial Killer Kuzo I-Thar Hills
by UTrey Hilburn III November 28, 2018
by UTrey Hilburn III November 28, 2018 1,498 ukubukwa
Abaxolelayo uma nawe, njengami, usadlula ezintabeni, ezigodini nasezixhaphozini ze I-Red Dead Redemption 2, lapho-ke uyazi ukuthi kunokuningi ongakuthola kulawa magquma angama-thar. Lokho okutholakele kusuka kokuphithizelayo kuya ekupholiseni kwesokudla-dang.
Okunye kwalokhu okutholakele bekusekuqaleni nje ngaphandle kweValentine. Ngabona inqwaba yamanqe elengisiwe, ngase nginquma ukuphenya. Ngithole i-torso eyodwa ilenga esakhiweni sebhuloho kufakwe izixhumiso namathumbu akhe. Ikhanda elinqunywe ikhanda labethelwa esigxotsheni ngombhalo ogoqiwe wafaka umlomo wakhe. Ngemuva kokuqaqa, ngathola ukuthi bekuyisiqephu semephu futhi ngaphuma ngenhloso yokuthola phansi kwalokhu.
Kulabo abajwayelene kakade nomdlalo, uyazi ukuthi umhlaba ovulekile unamandla amakhulu. Ukuseshwa kwezidumbu ezintathu kungumlutha kanye nenaliti ephelele esimweni se-haystack. Akusizanga lokho, bengimelene nokubheka izindawo ku-inthanethi. Izimo ezithile zokudlala zinomvuzo omkhulu lapho zitholwa ngokomzimba, okungenani kungenxa yami.
Ngakho-ke, ngemuva kokucwaninga okuphelele ngangiholelwa kwezinye izigcawu ezimbili zokubulala ezesabekayo ezazikhombisa okokuqala. Ngamunye unezidumbu ezisikiwe nekhanda elinqunywe ikhanda elilayishwe ucezu lwemephu.
Lapho ihlanganiswa ndawonye imephu iholela esiseleni sesiphepho esigcwele izingcezu zezisulu eziningana ngeshwa. Ngenkathi esesha isela u-Arthur Morgan ompofu uthathelwa phezulu futhi angqongqozwe.
Lapho u-Arthur evuka, u-Edmund Lowery Jr umi ngenhla kuka-Arthur echaza ngomqulu wakhe, nokuthi yini ayihlelile lo mfana wezinkomo ngeshwa.
Ngokuhamba okumbalwa okusheshayo, u-Arthur uyakwazi ukuguqula amatafula futhi abulale noma abulale u-Edmund.
Kuyimfuno eseceleni epholile eyayingeyokuqala yamaqanda ama-Easter ahlobene nokwesabeka asakazeka kuyo yonke indawo RDR2.
Yiliphi iqanda lephasika elipholile kunazo zonke okhubeke kulo? Sazise kumazwana abekiwe!
I-Red Dead Redemption 2 iphumile manje yonke indawo.